NDABA Ulwelo Imbonakalo inkunkuma yethu - China Yinzhou Nuoya
NDABA Ulwelo Imbonakalo inkunkuma yethu kwicandelo lokwakha eziphuculiweyo ngumkhuba kakhulu yadlala indima ebalulekileyo; nangona kwinqanaba design bokwakha eTshayina, lo ezinkulu umsantsa namazwe Koloni nokusetyenziswa zokwakha, kodwa NDABA engamanzi ukukulingana kwethu amandla yokwakha linentsingiselo ebaluleke kakhulu. Xa iiseshoni ezimbini, uMphathiswa wethu iNkulumbuso uye wazenza ephambili yolondolozo lwendalo izigqibo amandla, kwakunye nenkxaso ukwenzela uphuhliso lweemveliso NDABA elulwelo, kokubini yobugcisa yaye imveliso esemgangathweni, kufuneka ukuqalisa nokwazisa ubugcisa obutsha, sizibophelele ekuphuhliseni kwaye ziphuhliswe amazwe zikhuphisana technology imveliso Press ulwelo.
Ngoko ke, China kufuneka angene engamanzi NDABA mkhuba zehlabathi, kunye nabanye kubavelisi lwehlabathi ukukhuphisana, kukho ukhuphiswano, kukho inkqubela, yaye nathi sinokuba NDABA yehlabathi ulwelo ukuba ukukhula kwimarike in Practice ngokukhawuleza.
States nje ezinye izinto zokwakha amashishini amakhulu kufuneka imigaqo-nkqubo ethile ekhethekileyo, esifuna imveliso elikhulu-isikali zokwakha kwamashishini Ukubheka kufuneka isetyenziswe njengomzekelo engamanzi NDABA flagship, nto leyo inokuba kwicala ebalulekileyo zokukhuthaza.
UNowa isamente ngezitena oluthembekileyo, iinkcukacha epheleleyo, umgangatho ophezulu, ixabiso elifanelekileyo, isamente yezitena website esemthethweni: www.nbnuoya.com